သင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သူတိုင်းသည်ဖောက်သည်မဟုတ် Martech Zone
အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုနှင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ထူးခြားသောလည်ပတ်မှုများသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များမဟုတ်ပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့လည်ပတ်ခြင်းတိုင်းသည်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုစိတ် ၀ င်စားသူတစ် ဦး သို့မဟုတ် whitepaper တစ်ခုတည်းကိုဒေါင်းလုပ်ချသူတိုင်း ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုကုမ္ပဏီများကယူဆလေ့ရှိသည်။
ဝဘ် visit ည့် or ည့်သည်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများမှာ -
every ည့်သည်တိုင်းကိုဖောက်သည်ရေပုံးထဲထည့်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမျှဝေသူတိုင်းကိုရှာဖွေရန်အရင်းအမြစ်များကိုအကြီးအကျယ်စီးဆင်းစေရုံသာမကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများကိုတားဆီးရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောသူများအတွက်ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့စေနိုင်သည်။
visitors ည့်သည်များကိုဖောက်သည်များသို့ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) မည်သည့် visitors ည့်သည်များသည်ပြောင်းလဲရန်သင့်လျော်သည်ကိုသိရုံမျှဖြင့်၎င်းတို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘယ်မှာလဲ 3D (သုံးဖက်မြင်) ခဲရမှတ် ကစားသို့ကြွလာ။
ခဲအမှတ်သည်အသစ်မဟုတ်ပါ Big ဒေတာများမြင့်တက် စျေးကွက်သမားများနှင့်အရောင်းကျွမ်းကျင်သူများသည်ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများကိုမည်သို့ရှုမြင်သည်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဖြည့်စွက်ထားသော 3D ခဲအမှတ်ပေးဖြေရှင်းနည်းမျိုးဆက်သစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ 3D အမှတ်ပေးခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားနှစ်ပေါင်းများစွာသင်စုဆောင်းထားခဲ့သည့်တန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်များ၏သဘာဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသူများအားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အရောင်းနှင့်သင့်အခြေခံအကြောင်းအရင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် B2C သို့မဟုတ် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းရှိမရှိ၊ 3D ခဲအမှတ်ပေးခြင်းက၎င်းတို့နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုအဆင့်ကိုခြေရာခံနေစဉ်အားလုံးသည်အလားအလာရှိသူနှင့်ဖောက်သည်သည်သူတို့၏“ စံပြ” ပရိုဖိုင်နှင့်မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုတိုင်းတာရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ရောက်ရှိလာသော happened ည့်သည်တိုင်းထံ ၀ ယ်ယူမည့်အစားစျေးကြီးပြီးစျေးကြီးသောပိုက်ကွန်ကိုဝယ်မည့်အစားအမှန်တကယ် ၀ ယ်နိုင်သည့်လူများအပေါ်သင်၏အာရုံစိုက်မှုကိုသေချာစေသည်။
ပထမ ဦး စွာလူ ဦး ရေစာရင်းသို့မဟုတ် firmagraphics ဖော်ထုတ်ပါ
သင်၏ဖောက်သည်အားဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ 3D အမှတ်ပေးမှုကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ မင်းဒီလူကိုသိချင်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကငါ့ကုမ္ပဏီအတွက်သင့်တော်သလား။ သင်၏ဖောက်သည်များကို 3D အကဲဖြတ်ရန်မည်သည့်ပရိုဖိုင်းကိုသင်သုံးမည်ကိုသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
၀ င်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ ကလေးအရေအတွက်၊ ၎င်းတို့၏စတုရန်းပေ၊ ဇစ်ကုဒ်၊ စာဖတ်ခြင်း၊ အသင်း ၀ င်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုစသည့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
B2B အဖွဲ့အစည်းများသည်ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်၊ ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်၊ အခြားအဆောက်အ ဦး များနှင့်နီးကပ်ခြင်း၊ စာပို့သင်္ကေတ၊ လူနည်းစုပိုင်ဆိုင်သည့်အဆင့်အတန်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာအရေအတွက်နှင့်ဤကဲ့သို့သောအချက်များပါဝင်သော firmagraphicdata ကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
ဒုတိယအမှတ်ပေး 3D အပိုင်းသည်ထိတွေ့မှုဖြစ်သည်
တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒီဖောက်သည်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ကုန်သွယ်ရေးပွဲတွေမှာမင်းကိုတွေ့လား။ သူတို့သည်သင့်အားဖုန်းဖြင့်ပုံမှန်စကားပြောနေပါသလား။ သူတို့သည်သင်၏ Twitter၊ Facebook နှင့် Instragram တို့တွင်သင့်နောက်သို့ လိုက်၍ သင်၏တည်နေရာကိုလာသောအခါ FourSquare တွင်ဝင်ရောက်ပါသလား။ သူတို့သည်သင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင်ပါဝင်သလား။ သူတို့နှင့်သင်၏ဆက်ဆံမှုသည်သင်နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဆိုလိုသည်.
တတိယအချက် - သင့်ဖောက်သည်သည်သူတို့နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ
သင်၏ဖောက်သည်သည်သင်၏ဖောက်သည်ဖြစ်သည့်အချိန်အတိုင်းအတာအရသင် database ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲရန်လိုအပ်သည်။ ဤသူသည်သင့်ရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည့်ရာသက်ပန်ဖောက်သည်လား။ ဤကုမ္ပဏီသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုသတိမပြုမိသောဖောက်သည်အသစ်လား။ သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းတစ်သက်တာဖောက်သည်ထံသို့သင်ပို့သောအီးမေးလ်အမျိုးအစားသည်သူနှင့်သူနှင့်သူမဆက်ဆံရေးတွင်အစောပိုင်းကသင်တစ်ယောက်ယောက်ထံသင်ပို့သောစာနှင့်များစွာကွာခြားသည်။
များစွာသောစျေးကွက်သမားများကသူတို့၏ဒေတာဘေ့စ်များကိုလူ ဦး ရေပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ခိုင်မာသည့်အချက်များဖြင့်ခွဲခြမ်းထားသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် အသက်သွေးကြောအတွက်ဖောက်သည်ရဲ့ဇာတ်စင်မှအထိခိုက်မခံ နှင့် 3D အမှတ်ပေးအပေါ်ပိုမိုအားကိုး။ သင့်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးသည့်ဖောက်သည်အသစ်သည်သင်၏ရုံးသို့လာရောက်လည်ပတ်သောရေရှည်ဖောက်သည်များကဲ့သို့ခိုင်မာမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အလားတူစွာသင်ပြသသည့်ပွဲ၌သင်တွေ့ဆုံခဲ့သူသည်ငါးနှစ်ကြာနှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည့်ဝယ်သူထက် ပို၍ အားနည်းသူဖောက်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင် 3D အမှတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲသင်သိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပေး တိုင်း white ည့်သည်အဖြူ - လက်အိတ်ကုသမှု။
၀ ယ်ရန်အလားအလာရှိသော visitors ည့်သည်များအားအာရုံပြုရန် 3D ခဲအမှတ်အသားကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဤဆွေးနွေးမှုအားလုံးတွင်aည့်သည်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတိုင်းသည်ဖြူသောလက်အိတ်ကုသမှုအတွေ့အကြုံဖြစ်သင့်သည်၊ - visit ည့်သည်၏မျက်နှာသာအတွက်မောင်းနှင်သည်။ သတိရပါ၊ အဲဒါဟာပထမဆုံးရောင်းချမှုမှာအများဆုံးငွေရှာဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ည့်သည်သည်အမှန်တကယ်လိုအပ်ရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ဖောက်သည်များ၏အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အနာဂတ်ရောင်းအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ပြိုင်ဘက်များ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအားလုံးကိုဤယဉ်ကျေးမှုကိုတိုးချဲ့ပါ။ ကြင်နာမှုအနည်းငယ်သာခွဲဝေမှုကိုနောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်အချိန်၌ပေးဆပ်မည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိပါ။
အကောင်းဆုံးသောဖောက်သည်များကိုသင်အလွယ်တကူရှာမတွေ့ပါ။ သူတို့ကိုသင်မွေးမြူရမည်။ ဘယ်လိုလဲ? ၄ င်းတို့ကိုဘဝစက်ဝန်း၏အဆင့်တစ်ခုစီမှတစ်ဆင့်ချောမွေ့စွာရွေ့လျားစေခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်ရှာသောမှန်ကန်သောအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုကိုရှာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤအခွင့်အရေးသည် Right On Interactive ၏ Lifecycle Marketing ဖြေရှင်းချက်၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများအားအလားအလာရှိသူသို့မဟုတ်ဖောက်သည်သည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုတိကျစွာသိရှိနိုင်ရန် - မှအလားအလာရှိသည့်ပရိတ်သတ်အထိ - နှင့်တစ်သက်တာတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ရန်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ချဉ်းကပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထုတ်ဖော်: ညာဘက်အပြန်အလှန် ငါတို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် Martech Zone။ ယနေ့သူတို့၏ဘဝသံသရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြေရှင်းချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Right On Interactive အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Tags: 3d အမှတ်ပေးb2bb2cပြိုင်ဖက်ဖောက်သည်ဖောက်သည်ဘဝမှတ်တိုင်ဖောက်သည်ဘဝသံသရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်အပိုင်းအခြားမင်္ဂလာပါ။အလုပ်ရှာသူများခဲသွင်းခြင်းအွန်လိုင်း visit ည့်သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ဧည့်သည်များဝဘ် visitors ည့်သည်များ
Troy Burk, အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်တည်ထောင်သူ ညာဘက်အပြန်အလှန်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ခဲအမှတ်ပေးခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသိအမှတ်ပြုအတွေးအမြင်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Troy သည် Ball State University မှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏ဇနီး၊ ကလေးသုံးယောက်နှင့်အတူ Indianapolis တွင်နေထိုင်သည်။ ထိုတွင် Greater Indianapolis ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အသင်း ၀ င်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကော်မတီတွင်အမှုထမ်းပြီးလူငယ်အားကစားများတွင်ပါ ၀ င်သည်။